ရခိုင် ဖြစ်ရပ်များနောက်ကွယ်က စံနစ်ကျနမှုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရခိုင် ဖြစ်ရပ်များနောက်ကွယ်က စံနစ်ကျနမှုများ
ရခိုင် ဖြစ်ရပ်များနောက်ကွယ်က စံနစ်ကျနမှုများ
Posted by black chaw on Jun 13, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Myanma News, Think Different | 35 comments
(သိကြဘို့က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကို မနာလိုမရှိစိမ့်နိုင်ကြတဲ့ အိမ်နီးချင်းအချို့ ရှိတာကိုသတိချပ်ကြဘို့လိုပါတယ်။)
သူကြီးရဲ့ ပို့စ် Clinton on Violence in Burma’s Rakhine State ပို့စ်မှာ ဆရာမောင်မိုးညိုပေးတဲ့ ကွန်းမန့်ထဲမှာ ပါတဲ့ စကားလုံး တချို့ပါ။
ပညာရှိ တွေးတာ ပြေးကြည့်တာထက်မှန်သတဲ့။
ဆရာမောင်မိုးညို စကားနဲ့ အလားတူတဲ့ စာတချို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ထုတ် Favourite Journal ထဲမှာ ဆရာဖိုးသောကြာလည်း ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ နည်းနည်းလေး ထုတ်နှုတ်ပြပါရစေဦး…။
မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းထောင်လာမှာကို “မနာလိုမရှုစိမ့်တဲ့ စိတ်” မျိုးထက် အဆများစွာ ဆိုးရွားယုတ်မာတဲ့ “စိမ့်ဝင်ဖျက်ဆီးနည်းဗျူဟာ” ကို သုံးနေသလားလို့တော့ သံသယ၀င်မိတယ်ဗျာ။
“သိတ်မှန်တာပေါ့ဗျာ။ အနောက်ကမ္ဘာဟာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကို ပိုင်ဆိုင်တယ်။ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အရည်အသွေး (IQ) က မြင့်မားတယ်။ အရှေ့ကမ္ဘာက လူဦးရေများတယ်။ ဆင်းရဲတယ်။ နည်းပညာနိမ့်ပါးတယ်။ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အရည်အသွေးက သာမာန်လူသားအဆင့်ပဲ ရှိတယ်။ အာဖရိက အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ စွမ်းအင်သယံဇာတက စုပြုံနေတယ်။ လူသားအရင်းအမြစ်က ဘာသာရေးအယူသည်းကြတယ်။ ကမ္ဘာကို ပတ်ခြုံထားတဲ့ ဘာသာရေးက မွတ်ဆလင် (စွန်နီ နဲ့ ရှီရာ) (Sunni & Shi’a) ၊ ခရစ်ယာန် (ကက်သလစ်နဲ့ ဘက်ပ်တစ်) (Catholic & Baptist) ၊ ဟိန္ဒူ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ (ထေရ နဲ့ မဟာယန) တို့ဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ နယ်ချဲ့ပုံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကို သြဇာညောင်းဖို့ တစ်နည်း အဝေးထိန်းခလုတ် (Remote) နဲ့ ထိန်းနိုင်ဖို့ ဘာသာရေးမဟာဗျူဟာကို အသုံးချကြတယ်။ အီရတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရန် စစ်ပွဲတွေဟာ သက်သေပဲ။ ရေနံကြွယ်ဝတဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဘုရင်နဲ့ စော်ဘွားနိုင်ငံတွေဟာ အနောက်ကိုလည်း စီးပွားရေးနဲ့ နည်းပညာအရ မှီခိုရတယ်။ ဘာသာရေးအရလည်း မွတ်ဆလင် (စွန်နီနဲ့ ရှီရာ) ကို တိတ်တိတ်ပုန်း ကူညီနေရတယ်။ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာက ပေါ်တင်ကြီးဖြစ်လို့ ထစ်ကနဲဆိုရင် ကမ္ဘာကသိတာပဲ။ အခု အီရန် နြူကလီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နြူကလီးယား ကိစ္စတွေက အထင်အရှားပဲ။ စိမ့်ဝင်လာတဲ့ ဘာသာရေး မဟာဗျူဟာက ညက်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း အဲသလို မဟာဗျူဟာနဲ့ ကြံစည်နေကြတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း အမည်ခံတွေ မရှိဘူးလို့ မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့။ မြန်မာပြည်ထဲက မြေတွေကို ဥပဒေလက်တစ်လုံးခြားနဲ့ အပိုင်ဝယ်သိမ်း၊ မြို့ပေါ်က တိုက်ခန်းတွေကို ၀ယ်ပစ်၊ ကန်ထရိုက်တိုက်ဆောက်ပြီးသိမ်း၊ နယ်စပ်တွေမှာလူမွေး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်းဘုတ်တပ်၊ သယံဇာတတွေကို စိတ်ကြိုက်နှိုက်ယူနေကြတာတွေဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အနုနည်းနဲ့ အကျူးကျော်ခံနေရတာပဲ မဟုတ်လားဗျ။
မဆီမဆိုင် ဆွဲစေ့တယ်လို့ ပြောရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။
ဆရာမောင်မိုးညို ကွန်းမန့်နဲ့ ဆရာဖိုးသောကြာ ရေးတဲ့စာတွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါ အခုဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ဒေသက အရေးအခင်းတွေဟာ ဇာတ်ညွှန်းကြိုတင်ရေးထားတဲ့ ထိုးဇာတ်တွေဖြစ်နေမလားဆိုတာ သံသယ စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူ ကြီးမားလှတဲ့ မြန်မာဈေးကွက်ကြီး လက်လွှတ်ရနိုင်တဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကလည်း ရှိနေတယ်မဟုတ်လားဗျာ။
ဆရာဖိုးသောကြာရေးတဲ့ အနောက်ကမ္ဘာ နေရာမှာ ဆရာမောင်မိုးညိုကွန်းမန့်ထဲက အိမ်နီးချင်း တချို့ဆိုတာကို ထည့်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဗရမ်းဗတာ ဘလက် ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို သတိရမိကြဦးမလား မသိပါဘူး။
ဗရမ်းဗတာတွေမြင်တိုင်း ဗရမ်းဗတာတွေပါကွာလို့ အလွယ်တကူ မှတ်ချက်ပေးခြင်းမျိုးထက် ဗရမ်းဗတာတွေနောက်မှာ ကပ်ပါလာတတ်သော စံနစ်ကျနမှုလေးတွေကို မြင်တတ်အောင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ရခိုင်ဒေသမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဗရမ်းဗတာတွေနောက်မှာ စံနစ်ကျနမှုတစ်ခုခု ရှိနေနိုင်တယ် ဆိုတာလေး ….။
ဒီအချိန်မှာ ဗီးရှင်းအရေးကြီးပါတယ် ဆရာတို့ရေ…။
ဦးဘလက်ရေ .. ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး အသက်ကြီးသူ ၊ ၀ါကြီးသူ ၊ အတွေးခေါ်ရင့်သန်သူ၊ အမျှော်မြင်ရှိသူတွေရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေကို .. ဖတ်ရတာ …. အရမ်းပဲ အရသာ ရှိလှပါတယ် …….. ။
အရင်က မြောက်ဦးအကြောင်း ရခီုင်အကြောင်း ရှာရင်း အတော်များများ ရခိုင် sait တွေမှာ တူညီတဲ့အကြောင်းအရာတခုဖတ်မိတယ် ၊ အခုပြဿနာမှာ အချိန်ဆွဲနေပုံက ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအသုံးချ ပြီ ရခိုင်ကိုနှိပ်ကွပ်နေသလားလို့ (တမျိုးတွေးကြည်တာပါ) ။ နောက်ဆုံး မှ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရှင်း လိုက် နှုပ်ပိတ်လိုက် ။ ဒီလူစုလောက်ကိုဗျာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ လူ ၂၀ လောက် သနပ် မပါပဲ ထိန်းလို့ရပါတယ်၊ အခုဟာကဗျာ ပွဲကြည်နေသလိုမျိုးကြီး
ကိုဘလက်ရေ ကျွန်တော်တို.ကသာ ရခိုင်အရေး
ဗမာ နဲ.မြန်မာ ကိစ္စရန်ဖြစ်ဘို.တာစူနေပြီ….
ဝေ့ ၀ှိုက် ပြီးပြော မနေ ပါနဲ့ ကိုဘလက် ရယ်။
မြန်မာ ပြည် မှာ လတ်တလော ( လပိုင်း ရက် ပိုင်း လေးမှာ ) ကြီးမား တဲ့ အခက် အခဲ နှစ်ခု ရင်ဆိုင်ရတယ်။
၁။ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက် မလုံ လောက်မှု။
၂။ ခု ရခိုင် ပြည်နယ် အကြမ်း ဖက်မှု များ
အဲ ဒီ အရေး နှစ် ခု လုံး မှာ ကို တရုတ် ကြီး ငွေအင်အား ကို အသာ ထား နှုတ်ဧ။် စောင်မခြင်း တောင် မတွေ့ရ တာ မထင်ရှား ဘူးလားဗျာ။သူ က မြန်မာ ပြည် နောက် ပြန် သွားဖို့ အဓိက လို လားသူ လို့ ကျနော် တော့ မြင်တယ်။
7days ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှ…..
တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု့ရရှိရေးမြန်မာနိုင်ငံ၏ကြိုးပမ်းမှု့များကို တရုတ်နိုင် ငံထောက်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားညီညွတ်ရေး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု့များကို တရုတ်နိုင်ငံက ထောက် ခံကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ သူတစ်ဦး ကပြောကြားသည်။
ဇွန်လ၁၂ရက်ကပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို မေးမြန်းစဉ် မစ္စတာလျူဝေမင်းက ယင်းသို့ ပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ . မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်သံရုံးကလည်း သက်ရောက်မှု့ ရှိေ သာဒေသများ၌ သတိထား ကြရန် တရုတ်နိုင်ငံသားများနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများကို ခရီးသွားအကြံပေး ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံသားများကိုလည်း သံရုံးက လိုအပ်သော အကူအညီများပေးအပ်သွားမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားသည်။
ဟိုတလောက ဂျာနယ်တခုမှာ ကြံဖွံ ကလူက တရုတ်ကိုအဖေခေါ်ထားတာ မနည်းမနော။
ဘယ်သူ အကျိုးရှိမှာလဲ … ဆိုတဲ့ဘက်က လှမ်းပြီးစဉ်းစားမိလေ့ရှိသဗျာ…။
အကျိုးစီးပွား … ပဲ မဟုတ်လား….။
အားလုံးကို စီမံနေတာ အကျိုးစီးပွား…ဆိုပါလား
အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားရေးကို ဘယ်နိုင်ငံမှအထိခိုက်မခံနှိုင်ကြပါ။
မည်သည့်နိုင်ငံမဆို မိမိနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားရေး အတွက် စစ်တိုက်ခြင်း၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း…………..အစရှိသည့် မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။
Dear Black Chaw,
It is well planned terrorist attack by Rohingya to Rakhine/Myanmar.
This is serious. They are not playing. We have to be very very catious this Friday. Please alert everyone in Yangon as well as Mandalay and elsewhere when Govt is concentrating only in Rakhine….
This is from The Somokal News…
Today acts of terror by Bengali terrorists are the result of systematic plot to penetrate inside Rakhine State that was conceived six months ago.
This terror plot was published on 8 January 2012 by The Somokal News Agency of Bangladesh as below.
Rohingya militants get freshly united
The Somokal News
Sunday, Dhaka 8 January 2012 ৮ জানুয়ারি ২০১২
Abu Taher, Cox’s Bazar
The divided Rohingya militants are freshly getting united. Accordingtoareliable source, they are collectingafund of taka 500 (fivehundred) million for buying arms and ammunitions.
According to the source, Rohingya Solidarity Organization (RSO),Arakan Movement, Arakan People’s Freedom Party, Arakan RohingyaNational Organization (ARNO), and some other parties includingHarkatul Zihad have decided to group into alliance and work together.Top leaders including RSO President Dr Muhammad Yunus, Rohingya leaderDr Wakar Uddin, Abul Fayaz Zilani, Nurul Islam, Salamat Ullah,Muhammad Shafi Ullah, Nazmul Alam, have attendedameeting in Riyadh,Saudi Arabia.
Wakar Uddin (2nd fr L) & Mohammad Yunus (Standing)
In the meeting decision was reached to wage activities under thebanner of ‘the Arakan Rohingya Union’ (ARU) consisting of dividedRohingya militant outfits. The responsibility of the new outfit wasgiven to Dr Muhammad Yunus, Abul Fayaz Zilani, and Nurul Islam.Shortly after the meeting the top leaders have made moves forcollecting fund. The source has ensured that arms and ammunitionswill be bought with the fund.
Nurul Islam, Leader of the Rohingya Terrorists
The top leader Salamat Ullah returned from Saudi Arabia to Bangladeshlast month for newly organizing the Rohingya militants. At present heis residing at Chunoti of Chittagong in Bangladesh. On the other handNazmul Alam went back to Bangkok from Riyadh. Abu Siddiq Arman hasbeen given new responsibility as coordinator in Cox’s Bazar area.Besides that some top Rohingya militant leaders are in Cox’s Bazarnow. A Rohingya militant leader, Nur Muhammad, was spottedafew daysago in Cox’s Bazar.
The source said, in recent years the Rohingya groups got split into anumber of smaller groups because of internal feud. In thiscircumstance they have united under one banner and got engaged incollecting fund. They are also engaged in various forms of illegaltraffic, including drugs, human trafficking, and illegal arms. Lastweek an arms dealer was arrested from Gorzonia area with an AK-47assault rifle. The detained said that he bought the rifle for 3.5lakh taka and was meant for selling at4lakh taka, when he was nabbedin the trap.
From more than one source it has been confirmed that the Rohingyamilitants are collecting fund through operation of NGOs. They havealready collected about taka 250 (two hundred and fifty) million inthe name of some NGOs in Cox’s Bazar and Bandarban, including, amongothers, “Muslim Aid,’ ‘Karuna,’ ‘Imam Muslim,’ ‘Darul Ansar,’‘Samannito Manabik Uddyog,’etc.
Nurul Islam, Leader of the Rohingya Extremist Militants (extreme L)
The money brought through HUNDI (illegal financial operation) goes tovarious religious institutions and the rest to militants’ pockets. Ina recent investigation it has been found that Imam Muslim IslamicCentre at Zhilongza, Cox’s Bazar, has been running by militantfunding. The director of the institution, Hafez Sala-ul Islam, is thechief coordinator of the military wing of the RSO.From the investigation it has become clear that, militancy has been upin Cox’s Bazar, Chittagong and Cox’s Bazaar, due to the activities ofthe top Rohingya militants in the areas through madrasas (Muslimseminaries), religious institutions, and NGOs.
The former secretary of the Central Executive Committee of RSO,Salamat Ullah, establishedamadrasah named as Adarsha Shikkha Niketonat Kalatali, in Cox’s Bazar.
Two more militants, Muhammad Zaber and Nur Muhammad are working here.Zaber is the vice president of the Central Executive Committee of RSO,and Nur Muhammad isamember. The Rohingya militants have beenutilizing two refugee camps in Cox’s Bazar as their network. Manyillegal militants have been illegally staying in the camps andconducting terrorist activities from inside the camps; mentionableamong them are, Ali Zohar, Haji Fazal, Rafiq Ahmad, Hafiz Nayan, LaluDaktar, Shamsu Majhi, Hafiz Zalal, Moulana Shafiullah, Nurul HaqueMazhi, Nur Mohammad, Abdul Rashid, Mohammad Sayed, Abu Qader, AbuYahiya, Hamid, Ruhul Amin, and Abdullah Mohammad.
The source said that more than three hundred of these militants havebeen working as Imam or Muezzins across the country (Bangladesh).Many of them are Afghan-returnee militants.
Assistant Police Super of Cox’s Bazar, Chatradhor Tripura has said,“the police is maintaining law and order situation in the camps withlimited number of forces. The refugee camps are very sensitive areas.There isawatch by international organizations inside the camps.The police do not conduct raids without specific information. This‘advantage’ may have been exploited by the Rohingya terrorists.”
Original News (in Bengali language)
Just sharing my reply comment in Irrawaddy under this link..
စစ်တွေမြို့ ကြီးရဲ့ စိတ်ခြောက်ခြားစရာမြင်ကွင်းတွေကြည့်ပြီး..
ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က ကြိုးဆွဲသူ တကယ်ပဲ ရှိနေသလား..?
ရှိခဲ့ရင် ကြိုးဆွဲသူ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ..?
ဖနောင့်နဲ့ တင်ပါးတသားတည်းကြအောင်……ပြောပြီး…..ပြေးပြီဗျို့ …….။
ဦးဘလက်ပြောမှ ပိုတောင်ရင်လေးစရာကောင်းနေဘီ။ ကြားထဲက ဓါးစာခံဖြစ်ရရှာတဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေကို သနားတယ်ဗျာ။
တခါတလေကျတော့လည်း.. ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကို.. ဘုတ်တခုပေါ်..နေ့စွဲနဲ့ စီချရေးလိုက်ရင်.. အဖြေတခုရတတ်တယ်ဗျ..
တယောက်ယောက်များ.. Timeline နဲ့.. ချရေးတာမြင်ချင်သား..။
မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ကမ်းခြေ အရေးအခင်းဖြစ်စဉ် (မေ-၂၈ မှဇွန် ၁၃အထိ)
မေလ ၂၈ ရက်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် ရမ်းဗြဲ မြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု သပြေချောင်းကျေးရွာနေ မသီတာထွေးအား “အဓမ္မကျင့်၊ လူသတ်၊ ပစ္စည်းလု” မှုဖြစ်ပွားသည်။
ဇွန်လ ၃ ရက်။ သံတွဲ- တောင်ကုတ် ကားလမ်းဆုံတွင်မြန်မာနိုင်ငံသား၁၀ ဦးအားလူအုပ်စုဖြင့်ဝိုင်းဝန်းသတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပွားသည်။
ဇွန်လ ၄-၅ ရက်။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် ရေဒီယို (FM ရေဒီယိုကွန်ယက်များ)များမှ လူမျိုးရေးဘာသာရေး အရေးအသားအသုံးအနှုန်းများဖြင့်ထုတ်လွှင့်ရေးသားဖေါ်ပြပါရှိသည်။
ဇွန်လ ၆ ရက်။ အဖွဲ့ဝင်၁၆ဦးပါသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသည်။
ဇွန်လ ၈ ရက်။ မောင်တောနှင့်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင် ပုဒ် ၁၄၄ ထုတ်ပြန်သည်။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ သမ္မတမှ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာသည်။
ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(ဗဟို)ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
ဇွန်လ ၁၃ ရက်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားမှုများ ကြောင့် ဇွန်လ ၈ ရက်မှ ၁၁ ရက်အတွင်း လူနေအိမ် ၁၆၆၂ လုံး မီးလောင် ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်း၊ လူ ၂၁ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆိုင်ကယ် ၁၈ စီး၊ ဆိုင်ခန်း၆ခန်း၊ ထော်လာဂျီ ၃စီး၊ စက်ဘီး ၉စီး ပျက်စီး ခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။♦
မေလ ၂၈ ရက်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် ရမ်းဗြဲ မြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာ
အုပ်စု သပြေချောင်းကျေးရွာနေ မသီတာထွေးအား “အဓမ္မကျင့်၊ လူသတ်၊ ပစ္စည်းလု” မှုဖြစ်ပွားသည်။
၄၀၀၊ ၅၀၀ရာ ဘာတွေနဲဘယ်အချိန်ကဘဲရောက်လာလဲ
ဖန်တီး .ပြီးတော့စစ်တွေ . .၄င်းတို့ထွက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပါ၊ဒါပေမယ်လူဗြိန်းတွေယုံ၏
ဒါပေမယ်သိသူရှိ၏၊ကြည့်တတ်သူမြင်၏၊တရားခံတွေဓါတ်ပုံတိုင်းပါ၏ . .အောက်ခေါင်းစီး
ကလူမျိုးခြားလုပ်တာ၊ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မီးရှိုသတဲ့၊ကိုယ်ဈေးကိုယ်ရှိုသတဲ့ယုံစရာသတင်းဆောင်းပါ . . ရသေ့တောင်မှလည်းဒီလို့ လူနည်းစုနေတဲ့ရွာကို တခြားလာမီးရှိတာကို ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မီးရှိသတဲ့ရေးတဲ့နွားကရေး၊ယုံတဲ့နွားကယုံ၊
ဒါပေမယ်မလုပ်ဘူး . .ခင်ဗျားတို့သိအောင်လုပ် . .
ွပြီးတော့ရန်ကုန် . . ပြီးတော့
ဒီလိုနဲ့ပြဿနာမီးခိုးကြွက်ရှောက်ဖြစ်ကုန်ရော . . .ပြီးတောသူတို့လိုချင်တာ
တရားဟောသေး ..ဒီလိုဒီလို့ပါ . .သိသူကြည့် . .ကြည်သူမြင်၏ .အမှန်တရားသင်တို့နဲ့အနီးလေး
လှူဒါန်းမှုတွေကိုဒေါ်စုပြောသွား၏ နှစ်ဖက်စလုံးလှုပါ့တဲ့ ၊ဒါမှတရားမျှတမည်တဲ့၊
သဂျီးကပဲ ဆက်လက် ရှင်းပြစေချင်ပါကြောင်း…
ကျွန်တော်သည်စစ်တွေမြို့ နေတိုင်းရင်းသား ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့စစ်တွေမြို့ တွင် ယနေ့ကြုံတွေ့ နေရသောအခြေအနေသည် စစ်မြေပြင်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသည့်ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေပါသည်။
နေ့ရောညပါ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံတားဆီးနေရပါသည်။ အစိုးရလုံခြုံရေးရဲများကိုယ်တိုင် ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများ၏ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကို ခုခံနေရပါသည်။ ယနေ့အခြေအနေသည် တိုင်းရင်းသားရခိုင်လူမျိုးများ၌ မည်သည့်လက်နက်မှမရှိဘဲ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများ၌ RG-P များ မောင်းပြန်သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများနှင့် ဆက်စပ်နေတိုင်သော ရခိုင်ရပ်ကွက်အချို့ တွင် ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများက ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မီးနှင့်ရှို့ ပြီး ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးမီလောင်စေရန်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့် ပုံစံပြုလုပ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားကြပါသည်။ ယင်းရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားအင်အားကောင်းသောရပ်ကွက်များတွင် စုရုံးပြီးတိုက်ခိုက်ရန်အတွက် လာကြပါသည်။ ကုလားလူဦးရေသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးပွားမှုသည သာမန်မဟုတ်ဘဲ လူဦးရေပေါက်ကွဲနေသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် ကုလားတစ်ဦး မိန်းမလေးယောက်၊ တစ်နှစ် ခလေးလေးယောက်မွေးဖွားနှုန်းဖြင့် အဆမတန်လူဦးရေ တိုးပွားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့လူဦးရေသည် ရခိုင်လူမျိုးများ၌ Family Planning အရ သားသမီးနှစ်ဦးသုံးဦးထက်မပိုဘဲ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီ ကုလားမိသားစုများ၌ သားသမီးဆယ်ဦးအထက်ရှိနေခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရခိုင်များသည် လူနည်းစုဖြစ်လာပြီး ကုလားများသာ လူများစုဖြစ်လာပါသည်။
ဤပြဿနာ၌ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၁၅) မျိုးတွင် မပါဝင်ဟုနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ကြော်ငြာချက်ကို ယင်းရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများမကျေနပ်၍
ပြဿနာဖန်တီးကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြဿနာဖန်တီးမှုကို အဓိကအားပေးအားမြှောက်လုပ်နေသူများမှာ UNHCR မှ International Staff အချို့ နှင့် Local Staff အချို့ အပါဝင် INGO အချို့ မှ လက်နက်တင်သွင်းပေးပြီး တိုက်ခိုက်မှုကိုအားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စကိုအစိုးရမှလည်း သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံစွာရရှိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဤပြဿနာများကိုအမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းစေရန်နှင့် နောက်နောင်ပြဿနာမပေါ်ပေါက်စေရန် UNHCR အပါအ၀င် INGO များ အမြန်ဆုံးဤဒေသမှ ထွက်ခွာသွားရန်တောင်းဆိုပါသည်။ လက်နက်ကိုင်ပစ်ခတ်နေသော ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီကုလားများသည် R.S.O နှင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါသူပုန်များဖြစ်ကြပြီး ယင်းတို့အားအပြီးအပြတ်ချေမှုန်း၍ ပြည်သူလူထုအတွင်း မည်သည့်လက်နက်မှမရှိသော စစ်တွေမြို့ ဖြစ်စေရန်တောင်းဆိုပါသည်။
ဤပြဿနာသည် ကြိုတင်စီမံပြီး အချိန်ယူဖန်တီးမှုဖြစ်ပါသဖြင့် ပြဿနာဖန်တီးသူခေါင်းဆောင်များအား လူမျိုးတုံးသတ်မှုစီစဉ်သူတရားခံများအဖြစ် အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှု့
တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေး ခင်ဗျားမသေမချင်းမှတ်ထားဘို့ ဦးစွာပထမ သတိပေးလိုပါတယ်
( ဗျောက်အိုးဖေါက်ရင်တောင် ထောင်ချလို့ရတဲ့သဘောရှိပါတယ် )
သတင်းတွေမှာပြောပါတယ် ထွက်ပြေးကြတဲ့ ရခိုင်တွေကို အိမ်ပေါ်ကနေ ဘင်္ဂါလီတွေက သေနတ်နဲ့
ပြစ်ရာကနေ ရဲဖက်ကသေနတ်နဲ့ ပြန်ပြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
( ဘယ်ဆိုဒ် လည်းဆိုတာတော့ မပြောစရာလိုမည်မထင် )
ဆိုခဲ့ပြီးသလို အိမ်တစ်အိမ်ကနေ သေနတ်နဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါ ( ဘယ်အိမ်လည်း )
မြန်မာပြည်ဖွဲ့စည်းပုံအရ သေနတ်နဲ့ပြစ်တာကိုဘေးချိတ်ထား သတင်းလေးရတာနဲ့
ခုတော့ သေနတ်နဲ့ပြစ်တာကိုတွေ့တဲ့နောက်တော့ ဘယ်အိမ်လည်း ဘယ်သူပိုင်လည်း
အထူးဆိုလိုခြင်တာက မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ပေါ်ကနေ သနတ်နဲ့ပြစ်ဘို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး
ဆိုတာရယ် ဒီလိုပြစ်တဲ့နောက်တော့ ဒီလိုဘဲ နေလို့ရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်အဖွဲ့စည်းဟာ လက်နက်အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်
လက်နက်အင်အားဘယ်လောက်ရှိရင် ဘာအဖွဲ့စည်းခေါ်တယ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်
လက်နက်ငါးထောင်ကို ထိမ်းသိမ်းဘို့ဆိုတာ ဘာကြီးကြယ်လို့လည်းလို့ဆိုခြင်တာလား
ကျုပ်အထင် အဲ့သည် လက်နက်ငါးထောင်ဆိုတာ
ချီးကြုံးတဲ့ လက်အိပ်မဲမဲ ( ဒါလဲ လက်နက်ဘဲ ) တွေဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်
ခင်ဗျားရဲ့ ကော်မန့်ဟာ လူတွေအနေနဲ့ ဘင်္ဂလီကလားတွေကို ကြောက်စေဘို့
မုန်းစေဘို့ ရန်စတစ်ခုကို စပေးလိုက်သလိုဘဲ
ကျုပ်ဝါးတားတားဖြစ်နေတာက ဒုတ်ဓားလက်နက်တွေနဲ့ ကလားအုပ်ကို
ပြည်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ လူအုပ်စုကို တွေ့နေရပါလျှက်နဲ့
ပြောရရင်တော့ အောလပုံပေါ့ ငါလိုးမသားရယ်
ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ရဲမှူးကြီးလှမိုးက “ဒီဖြစ်စဉ်က ရှင်းရှင်းလေးရယ်နဲ့ အခက်တွေ့နေတာပါ ပြည်နယ်အတွင်းမှာက ဟိုဘက်လုပ်လိုက်၊ ဒီဖက်ကလုပ်လိုက် သတင်းတွေ မကြာခဏကြားရတယ်၊ အချို့သတင်းတွေက မမှန်ကန်ဘူး၊ အခုဖြစ်စဉ်ဆိုရင်လည်း ရခိုင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အဲဒီသံတော်လီကျေးရွာက လူမျိုးခြားတွေ ဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် မခံနိုင်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက တစ်ဖြည်းဖြည်းများလာပြီး အဲဒီဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးခြားကျေးရွာတို့ကို ၀င်ပြီးတော့ နှစ်ဖက်ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေက မွန်းလွဲ ၁၂း၃၀ လောက်မှာ အဲဒီကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တဖြည့်းဖြည်း များလာတဲ့အချိန်မှာပဲ ရဲကင်းက တာဝန်ရှိသူတွေက လူစုခွဲဖို့အတွက် မိုးပေါ်ထောင်ပြိး သေနတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို သံတော်လီကျေးရွာထဲက လူမျိုးခြားတွေက ပစ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ ပိုပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ အခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ”ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် ရဲတပ်ရင်းမှ ၀င်ရောက် ထိန်းပေးနေသည့်အချိန်တွင် သံတော်လီကျေးရွာအတွင်းမှ သေနတ်ဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ရင်းမှ ခြောက်လှန့်သည့်အနေထားဖြင့် အကြိမ်ရေ ၁၅ ကြိမ်ခန့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါရဲတပ်ရင်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် မွန်းလွဲပိုင်း (၁း၄၅)အချိန်တွင် အဆိုပါကျေးရွာထဲသို့ ၀င်ရောက်ပြီး ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများကို ခေါ်ယူ၍ ခိုက်ရန်မဖြစ်ကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သံတော်လီကျေးရွာနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများ နေထိုင်သည့် ကျေးရွာများကြားတွင် တပ်မ(၂၁၀)မှ တပ်ခွဲတစ်ခွဲလုံခြုံရေးယူကာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆက်လက်၍ ရဲမှူးကြီးလှမိုးက “ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်၍ အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့အတွက် တာဝန်ယူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက နာကျည်းတဲ့စိတ်တွေကို ရှေ့မထွက်ပဲ နေဖို့လိုတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဥပဒေအရ အရေးကြောင်းအရ အရေးယူပေးသွားမှာပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၁၂ ရက် နံနက် ၉း၅၃ နာရီ
ဆိုဒ်တခုကကူးတာပါ မူရင်းတိုင်းပါပဲ အပေါ်အပိုဒ်နဲ့ အောက်အပိုဒ်လွဲနေတယ်ဗျ….. ဪ..စဉ်းစားရအုံးမယ်
RPJ လားမသိပါ သူပြောချင်တာ။ကျနော်ကြားသလောက်တော့ လုပ်သေနတ်လေးတွေ
ခုရက်ပိုင်း သတင်းတွေက အမှန်တဝက်၊အမှားတဝက်နဲ့ မို့ စဉ်းစား၍သာယုံကြပါရန်။
ရခိုင်မှာ ဒီလိုအနေအထားနဲ့ အင်တာနက်သုံးလို့ရသေးတယ်လား၊ တယ်ဟုတ်ပါလား။
(၈၈) အရေးအခင်းစတင်စဉ်က ကြို့ကုန်း RIT ရှေ့ကလဖက်ရေဆိုင်မှာ သီချင်းလုစကားများရာကစခဲ့တာမှတ်မိကြမယ်ထင်ပ။ အရေးအခင်းတွေအစပျိုးတတ်တဲ့ ကနဦးဖြစ်စဉ်တွေပြန်ကြည့်ရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအစအနတွေကို ကြည့်နေတတ်တဲ့တောကြောင်တွေက အမြဲရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ (၁၉၅၀-၇၀) ၀န်းကျင်တုံးက ဗကပ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ စနက်လွှမ်းမိုးခဲ့ပေမဲ့ (၂၀)ရာစုမှာတော့ ဒီလို မြင်ရအကဲခပ်ရ ခက်တဲ့တောကြောင်တွေက အုံကြွမှုအတွက် အစကိုအမြဲချောင်းနေတတ်ကြပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့ လျင်မြန်တဲ့ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုအပေါ်မနာလိုမှုဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကအစိုးရတွေကမဟုတ်တောင် Al-quida လိုအဖွဲ့တွေက ချောင်းနေတတ်ကြပါတယ်။
ကိုဘလက် ဆွေးနွေးသလို နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ မနာလိုမရှုစိမ့်နိုင်မှုတွေက ဖွားဖက်တော်တွေအနေနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ဒါခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီး လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ ရောင်စုံသောင်းကြမ်းသူတွေ ပေါ်ပေါက်လာရတာကလည်း အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့စနက်မကင်းပါဘူး။ တကယ်ခံရတာက တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လူထုတရပ်လုံးပါ။ အစိုးရဆိုတာကတက်ပြီးမကြာခင်ဆင်းသွားတာပါဘဲ။
စစ်တလင်းအသွင်ပြောင်းနေတဲ့ ရခိုင်ဒေသကဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးရင်နင့်အောင်ခံစားရပါတယ်။ ဒါတွေကြည့်ပြီးအူမြူးနေကြတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို မျက်စေ့ထဲ့ပြေးမြင်ယောင်နေမိပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက လူထုကြားထဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆင်းပြီး လူထုသဘောပေါက်အောင် နားချကြပါ။ တပ်နဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တသားထဲဆိုတာကိုပြကြပါ။ ဒေသထူထောင်ရေး၊ လူတန်းစေ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေး အတွက်လုပ်စရာအလုပ်တွေတလှေကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိပြုကြပါ။
ဘင်္ဂါလီတွေကြားထဲမှာ လက်နက်ကိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ သွေးဆောင်နေသူတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံဖေါ်ထုတ်အရေးယူပါ။ ဒီသပ်သျှိုသမားတွေ က ရခိုင်ပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ကွန်မင်ဒိုပြောက်ကျားနည်းဗျူဟာ သုံးပြီး နှိမ်နင်းသင့်ရင်နှိမ်နင်းပါ။ အဲ့ဒါတွေမလုပ်နိုင်သေးရင်၊ ရခိုင်မီးပွားက တခြားပြည်နယ်တွေကိုကူးစက်လာနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ….။
နှစ်းဆီက အဂျစ်ဆီကကူးသလား၊အဂျစ်က နှင်းဆီ ဆီကကူးသလားဘဲ
ဆိုဒ်တခုကကူးတာပါ မူရင်းတိုင်းပါပဲ ..မီဒီယာ တခုထဲမှာပဲ ၂ ခု လွဲနေတာတွေ့လို့ ချင့်ချိန်လို့ရအောင် အထက်ကကျနတော့ comm မှာ ကူးတင်တာပါ
ဟုတ်ပါတယ် ရခိုင်ဒေသမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဗရမ်းဗတာတွေနောက်မှာ စံနစ်ကျနမှုတစ်ခုခု ရှိနေနိုင်တယ် ဆိုတာလေး ….။တွေးချင့်စရာဖြစ်ပါဂျောင်း…